တိုက်ရည်ခိုက်ရည် အပြည့်နဲ့ ကမ္ဘာ့ အချောဆုံး လက်နက်ကိုင် အမျိုးသမီး စစ်သည်တွေ ရှိတဲ့ နိုင်ငံ ( ၁၀ ) နိုင်ငံ – Na Pann San
အေအေ ကို �...
အမျိုးသမီးတွေ စစ်တပ်မှာ စစ်မှုထမ်းလာခဲ့တာဟာ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ လောက်ကြာခဲ့ပါပြီ ။ စစ်ပွဲထဲ မှာ အမျိုးသားတွေနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အပြင် ရာထူးအမျိုးမျိုးနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြ တဲ့ စစ်သမီးတွေ စစ်တပ်ထဲမှာ ရှိနေကြ ပါတယ် ။ အခုဖော်ပြမယ့်စာရင်းကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချောဆုံး အမျိုးသမီး စစ်သည်တွေရှိတဲ့ စစ်တပ်တွေပဲဖြစ်တယ် ။သူတို့ဟာ တကယ်ကိုချောတယ်ဆိုတာ သင်မြင်ရ မှာပါ ။ ကျွန်တော့် အမြင်မှာတော့ သူတို့ဟာ မယ်စင်္ကဝြဠာဆုတောင် ရနိုင်လောက်အောင်ချောတယ် ဆိုပေမယ့် လည်းနိုင်ငံ ကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက်စစ်တပ်ထဲ မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြ တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ပဲဖြစ် ပါ တယ် ။
အခု ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း က ချောမောလှပ တဲ့ အမျိုးသမီး စစ်သည်တွေ ကို တစ်ချက်လောက် ရှုစား လိုက်ရအောင် .. ။
၁၀. အမေရိကန် စစ်တပ်
အမေရိကန် စစ်တပ် ဟာ ကျွန်တော်တို့ စာရင်း ရဲ့ နံပတ် ၁၀ မှာရှိနေ ပါတယ် ။တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲတွေ တင်မကဘူး အခြားတိုက်ပွဲများမှာပါ အမျိုးသားတွေနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန် စစ်တပ်ရဲ့ ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အမျိုးသမီးစစ်သည်တွေဖြစ်ကြတယ် ။အမျိုးသမီးပေါင်း ၁၆၅ ၀၀၀ လောက် စစ်တပ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြပြီး ၃၅၀၀၀ လောက်တော့ အရာရှိတွေပဲဖြစ် ပါတယ် ။
၉. Czech Republic စစ်တပ်
Czech Republic စစ်တပ်
ချက် စစ်တပ်ဟာ နှစ်ကာလ အတန်ကြာအောင် အမျိုးသမီးတွေကို စစ်မှုထမ်းခွင့်မပေးခဲ့ ပါဘူး ။ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အပြီး မှာတော့ ဆေးဘက်အကူ ဖုန်းအော်ပရေတာတွေနဲ့ လေကြောင်းဆန့်ကျင်ရေးအပိုင်းတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တယ် ။ချက်စစ်တပ်ဟာ ဆိုဗီယက်စစ်တပ်လက်အောက်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ အခုချိန်မှာတော့ သူတို့ဟာချက်စစ်တပ်အနေနဲ့သီးသန့် ရပ်တည်ခဲ့ပြီပဲဖြစ် တယ် ။ပြိးတော့ လေတပ်မှာလည်း အမျိုးသမီးတွေကို တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ။
နံပတ် ၈ ကတော့ ပိုလန် ပါပဲ…အမျိုးသမီးပေါင်း ၂၅၀၀လောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြပြီးတော့ အမျိုးသားတွေနဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးပေးထား ပါတယ် ။ပိုလန် ကြည်းတပ် ရေတပ် လေတပ်နဲ့ အထူးစစ်တပ်တွေမှာလည်း အမျိုးသမီးတွေကို တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပေးထား ပါတယ် ။
နံပတ် ၇ နေရာမှာရှိနေတာ ကတော့ ဗြိတိန်စစ်တပ် ပါပဲ ။၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ ဗြိတိန်စစ်တပ်မှာ အမျိုးသမီးတွေ ကို တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ။ကြည်းတပ်မှ တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်း ၊တော်ဝင်ရေတပ်နဲ့ တော်ဝင်လေတပ် တို့မှာတော့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်မရှိပါဘူး ။
၆. ပါကစ္စတန် စစ်တပ်
ပါကစ္စတန်အမျိုးသမီးစစ်သည်တွေ ဟာလည်း ချောမောလှပလွန်း တဲ့ လက်နက်ကိုင်စ စ်သည်တွေဖြစ် ပါတယ် ။ပါကစ္စတန်ဟာ အမျိုးသမီးတွေ စစ်တပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရှိတဲ့တစ်ခုထဲသော အစ္စလာန်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ် ။၁၉၄၇ ခုနှစ်မှာ စတင်ပြီးတော့ အမျိုးသမီးတွေ ကို တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာတော့ အမျိုးသမီးစစ်သည်အတော်များများရှိနေပါပြီ ။၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာတော့ လေတပ်ရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးလေယာဉ်မှူး ကိုခန့်ထားခဲ့ပြီး စနိုက်ပါ ၊ ဗုံးကြဲလေယာဉ်မယ် တွေနဲ့ စစ်လက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်ဖို့အတွက် စတင်လျော့ကျင့်ပေးခဲ့ ပါတယ် ။ ပါကစ္စတန်ရေတပ်က အမျိုးသမီးစစ် သည်တွေကတော့ တိုက်ခိုက်ရေး မှာ ပါဝင်ခွင့် မရှိပါဘူး ။
အစ္စရေးနိုင်ငံကတော့အမျိုးသမီးတွေကိုပါရှေ့တန်းမှာ ပါဝင်ခွင့်ပြုတဲ့နိုင်ငံပါပဲ ။ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်တဲ့သူတိုင်းဟာ စစ်တပ်ထဲမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ် ။IDF စစ်တပ်ရဲ့ ၃၁ ရာခိုင်နှုန်းဟာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ ဗြိတိန်စစ်တပ်ထက် ၃ ဆပိုများ ပါ တယ် ။ ဒါပေမယ့် လူများလို့ချောမောတဲ့ သူများနေတာတော့ မဟုတ်ဘူး ။
နံပတ် ၄ နေရာမှာရှိနေ တာကတော့ ဂရိစစ်တပ်ပါပဲ ။၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်တဲ့အမျိုးသားအားလုံးဟာ စစ်တပ်မှာ ကိုးလတိတိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါတယ် ။အမျိုးသမီးတွေကတော့ မဖြစ်မနေတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာ မျိုးမရှိပေမယ့် အမျိုးသားတွေ ကတော့ စစ်မှုမထမ်းမနေရဖြစ် ပါတယ် ။
နံပတ် ၃ နေရာမှာ ရှိနေတာကတော့ သြစတေးသျ စစ်တပ် ပါပဲ ။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်ကစပြီးတော့ သြစတေးသျစစ်တပ်မှာအမျိုးသမီးတွေကို တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တာပဲဖြစ်တယ် ။၁၉၄၁-၄၂ မှာတော့ သြစတေးသျတော်ဝင်ရေတပ် ၊ သြစတေးသျကြည်းတပ် နဲ့ သြစတေးသျတော်ဝင်လေတပ် တို့ မှာ အမျိုးသမီး တွေကို အထောက်အပံ့တပ်ဖွဲ့တွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပေး ခဲ့တယ် ။၁၉၇၀ နဲ့ ၈၀ ပြည့်နှစ်မှာတော့ အမျိုးသမီးတွေကို သြစတေးသျကာကွယ်ရေး စစ်တပ် ADF မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီးတော့ တိုက်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဆင်နွဲခွင့်ပြု ခဲ့တယ် ။
ရုရှားနိုင်ငံဟာ ချောမောလှပတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ သွယ်လျတဲ့ခန္ဓာကိုယ် နဲ့ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ဝိညာဉ်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ရှိတဲ့နေရာပဲဖြစ် တယ် ။ ရုရှားစစ်တပ် မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကတော့ ကမ္ဘာ့အလှဆုံး အမျိုးသမီးစစ်သည် စာရင်း မှာ နံပတ် ၂ ချိတ်ထားတဲ့သူတွေပဲဖြစ် ပါတယ် ။Great Patriotic စစ်ပွဲအပါအဝင် ရုရှားသမိုင်း တစ်လျောက် မှာ တာဝန်အမျိုးမျိုး ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြ တဲ့ စစ်သမီးတွေပဲဖြစ် ပါတယ် ။
၁. ရိုမေးနီးယား စစ်တပ်
ဒီ အရှေ့ဥရောပ နိုင်ငံကတော့ နံပတ် ၁ နေရာမှာရှိနေ ပါတယ် ။ကမ္ဘာ့အလှဆုံး စစ်သမီးတွေ ကို မြင်ချင်ရင်တော့ ရိုမေးနီးယား စစ်တပ်ကလွဲပြီးတခြားနေရာ ကိုသွားမရှာပါနဲ့ ။ရိုမေးနီးယား စစ်တပ်ဟာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း စစ်လက်နက်ရှိ တဲ့ စစ်တပ်တစ်ခုဖြစ်ချင် မှဖြစ်မယ်…ဒါပေမယ့် စစ်သည်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုအရည်ပျော်သွားစေမယ့်လက်နက်တွေ ရှိနေ တာတော့ အသေအချာ ပါပဲ…ဒါကတော့ ချောမောလှပလွန်း တဲ့ စစ်သမီးတွေပေါ့ ။
အသုဘချနေတုန်း အခေါင်းထဲက အလောင်းကောင် လက်ရမ်းပြ နေသော ဖြစ်ရပ်ဆန်းကို အမိအရရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ( ဗီဒီယို )
အီရနျနိုငျငံ ရဲ့ ပဈမှတျ ၅၀ ကြျောကို တိုကျခိုကျဖို့ အသငျ့ခြိနျရှယျထားပွီးဖွဈကွောငျး သတငျးထုတျပွနျ
လာအိုနဲ့ မြန်မာမှာတော့ ခုထိ COVID-19 လူနာမတွေ့သေး။ အီရန်မှာ ဒီလောက်ဖြစ်နေတာတောင် နှစ်ကူးအတွက် ပစ္စည်းများအ၀ယ်ထွက်ကြ ( March 18 ရက် COVID-19 နောက်ဆုံးရ သတင်း )
အိန္ဒိယ တွင် ၃ ရက် ဆက်တိုက် ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရသူ (၄၅၀၀၀) ကျော်ကာ စံချိန်တင်မြင့်တက်နေ
မိတ်အင် ပူတင် တချက်ခုတ် ငါးချက်ပြတ် အကွက်တွေ နဲ့ ရုရှားနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့ တန်ပြန် တိုက်စစ် မှာ အမေရိကန် ကျရှုံးမလား…( US Vs China ၅၀=၅၀ )